192.168.8.1 - Hagaaji Aagagga Wiilka WiFi
Hagaaji Aagagga Wiilka WiFi - A WiFi aag dhintay asal ahaan waa meel ka mid ah gurigaaga, dhismahaaga, goobta shaqada, ama aagag kale oo dheeraad ah oo la filayo inuu daboolo Wi-Fi, laakiin halkaas kama shaqeynayo - qalabku ma awoodo inuu ku xirmo shabakadda. Haddii aad aalad u qaadatid aag dhintay - macquul ahaan inaad isticmaaleysid kiniin ama taleefan casri ah oo aad gasho qol ay ku taal aag dhintay - Wi-Fi ayaa joojinaya shaqadii; mana heli doontid calaamado. -Fi waa la ikhtiraacay, sidaa darteed waxaa loo dhisi karaa siyaabo farageliya Wi-Fi. Waxyaabaha birta ah ee waaweyn sida darbiyada biraha ama armaajooyinka faylalka ayaa xitaa xannibi kara calaamadaha Wi-Fi.
Siyaabaha loo Hagaajiyo Aagagga Wiilka WiFi
Hoos waxaa ku yaal tilmaamo kooban oo ku saabsan caymiskaaga Wi-Fi.
Haddii routerku ku yaalo hal gees oo ka mid ah gurigaaga, gurigaaga, ama goobtaada shaqada isla markaana ay jirto aag dhintay oo ku yaal geeska kale ee gurigaaga, iskuday inaad u wareejiso router-ka meel cusub oo bartamaha gurigaaga ah, gurigaaga, ama goobta shaqada.
Dheellitir Anteenada Raajiyahaaga
Hubso in anteenada router-kaagu kor u kacsan yahay isla markaana toos u tilmaamayaan. Hadday si toos ah u tilmaamayso, ma heli doontid isla heerka caymiska.
Goobaha Xirmooyinka & Dib u Dejinta
Haddii router-kaaga Wi-Fi la haayo ka sokow armaajo faylal bir ah oo yareynaya awooddaada ishaaradeed. Isku day inaad dib ugu dhigto goobtaada xoog calaamado xoog leh & fiiri inay taasi meesha ka saarayso aaga dhintay.
U beddel Shabakadda wireless-ka ugu yar
U adeegso qalab sida midda 'Android' ama 'SSIDer' ee 'Wifi Analyzer Mac' ama 'Windows' si aad uga hesho shabakadda wireless-ka ugu yar ee shabakaddaada Wi-Fi, marka xigta wax ka beddel dejiyaha router-ka si loo yareeyo soo dhexgalka shabakadaha fiilooyinka badan.
Samee Ku-celiye Ku-Xiriira
Waa inaad sameysid soo-celin wireless si aad ugu fidiso ceymiska aag aad u ballaaran haddii midkoodna talooyinka kor ku xusan aysan caawin. Tani waxay muhiim ku noqon kartaa xafiisyada waaweyn ama guryaha.
U adeegso Xiriir Fiileed si aad u Hagaajiso Aagagga Wiilka WiFi
Xitaa waxaad ka fiirsan kartaa inaad dejiso fiilooyinka Ethernet-ka ee internetka. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay caymis weyn oo wireless ah inta badan gurigaaga, laakiin uma muuqan kartid inaad kaheleyso signiinka Wi-Fi gudaha qolkaaga jiifka -waxaa macquul ah inaad heysato fiilooyinka digaagga ee birta ah gidaarada dhexdooda. Waad ka ordi kartaa fiilada Ethernet-ka router-kaaga illaa qolkaaga jiifka, ama labo xarig oo xarig koronto ku xiraya haddii aadan sidaa ugu heellanayn inaad aragto fiilooyinka wareegaya marinka, ka dib qotomiye router dheeri ah qolka dhexdiisa. Markaa waxaad ubaahnaan laheyd gelitaan internet wireless ah qolka hore ee banaan.
Haddii aad leedahay aagag wireless ah oo dhimanaya waxay ku xirnaan karaan router-ka, meesha ay deggen yihiin, deriskaaga, waxa derbiyada aqalkaaga laga dhisay, cabbirka booska aad ku dabooli karto, noocyada aaladaha elektaroonigga ah ee aad haysato, iyo halka alaabtu dhigato. Waxaa jira wax ku filan oo sababi kara dhibaatooyin, laakiin tijaabada & qaladku waxay kaa caawin doonaan inaad hoos u dhigto dhibaatada.
Aagagga meheradda ee bilaa wirelessku ma dhib badna si loo ogaado haddii aad ku dhowdahay gurigaaga, xafiiskaaga ama aqalkaaga. Ka dib markii aad soo ogaatid iyaga, waxaad ku tijaabin kartaa xalal kala duwan & inaad saxdo wixii kicinaya dhibaatada.